Lukaku Oo Kashifay Waxa Sababay In Uusan Goolal U Dhalin Man United Ciyaarihii U Dambeeyay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Lukaku Oo Kashifay Waxa Sababay In Uusan Goolal U Dhalin Man United Ciyaarihii U Dambeeyay
November 14, 2017 at 13:57 Lukaku Oo Kashifay Waxa Sababay In Uusan Goolal U Dhalin Man United Ciyaarihii U Dambeeyay2017-11-14T13:57:09+00:00 CAYAARAHA
Weeraryahanka kooxda kubada cagta Manchester United, ee Romelu Lukaku, ayaa wuxuu ahaa mid aanan goolal badan udhalin kooxdiisa ciyaarihii ugu dambeeyay, oo ay ka dheesho tartamada kala duwan.
Xidigaan oo kaliya sanad ciyaareedkan uu uhayay kii ugu horeeyay ayaa qeybtii hore ee horyaalka wuxuu ku socday dardar xoog leh, asigoona dhalinayay goolal wuxuuna haatan leeyahay, 7 gool.
Isagoo la hadlayay saxaafada, ayaa wuxuu sharaxaad uu ka bixiyay sababta uusan usoo taaban maalmihii u dambeeyay shabaqa, wuxuuna eeda dusha ka saaray bandhiga liita, oo ay soo bandhigeysay kooxdiisa, kulamadii udambeeyay.
Wuxuu usheegay Sky Sport: “Bilowgii xili ciyaareedkan, waxaan ahayn kuwa fursado badan oo wanaagsan sameynayay, balse, todobaadyadii udambeeyay ma aanan ahayn sidii hore, taasi dhibaato ayay iigu noqotay aniga.
“Balse, waxaan fileynaa inaan si deg deg ah, aan usoo laabto, sababtoo ah, waxaa noosoo laabanaya, ciyaartoy waa weyn, taasoo aan ka heli doono shaqsi ahaanteyda, dhiiro gelin badan, waana soo laaban doonaa,” ayuu sii raaciyay.
« Xukuumadda FS oo sheegtay inay xoojinayso culumada si loo jabiyo fikirka Al-shabaab
Madaxweynaha Iran oo booqday deegaanada uu dhulgariirku saameeyay (SAWIRRO) »